Semalt: Indlela yokusebenzisa i-Python Ukukhahlela iWebhusayithi?
Idatha idlala indima ebalulekileyo ekuphenyweni, akunjalo? Ingakhokelela kwindlela entsha yokujonga izinto kunye nokuphuhlisa ezinye iinkcazelo. Into ebhetele kakhulu kukuba idatha okhangelayo ayifumaneki ngokulula. Ungayifumana kwi-Intanethi, kodwa kungenzeka ukuba ayikho kwifom ekhutshelwayo. Kwimeko enjalo, ungasebenzisa ubugcisa bewebhu ukucwangcisa nokuqokelela idatha oyifunayo.
Kukho iindlela ezininzi zokukhahlela kunye neelwimi ezingenokunceda ngale nkqubo. Eli nqaku liza kukukhokela malunga nendlela yokusebenzisa ulwimi lwe-python ukucoca isayithi. Uya kufumana ulwazi oluninzi malunga nokusebenza kwamaphepha ewebhu. Uya kukwazi ukuqonda indlela abaphuhlisi abenza ngayo idatha kwiphina iwebhusayithi.
Isiqalo sokuqala ukukhuphela nokufaka i-Anaconda Python Distribution kumashishini akho. Ungakwazi kwakhona ukuthatha izifundo ezithile kwiisiseko zeelwimi zolwimi. Indawo efanelekileyo yokumisa ingaba yiCodecademy ngokukodwa xa ungenayo ingcamango kule ntsimi.
Esi sikhokelo siza kusebenzisa i-Polk Country njengoluhlu lwangoku kubanjwa kwamabanjwa. Siya kukukhokela malunga nendlela yokusebenzisa isicatshulwa sePython ukukhupha uluhlu lwamabanjwa kwaye ufumane idatha efana nesixeko sokuhlala kunye nohlanga lwabanjwa ngalinye. I-script yonke esiza kuyithatha iyagcinwa kwaye ivuliwe kwi-GitHub..Le ngenye yeeplani ezithandwayo ze-intanethi ezivumela ukwabelana ngeikhowudi zekhompyutha. Iikhowudi zinomxholo omude weengxelo eziza kunceda kakhulu kuwe.
Xa uphawula nayiphi na isayithi, isixhobo sokuqala ukukhangela sisiphequluli sewebhu. Uninzi lweziphequluli luza kunika abasebenzisi be-HTML izixhobo zokuhlola ezincedisayo ekuphakanyiseni ukukhwabaniswa kwebhayisi-injini kunye nokuqonda isakhiwo sephepha. Indlela ofikelela kuyo nganye ithuluzi iyahluka kwi-browser enye ukuya kwenye. Nangona kunjalo, i-mainstay yiyona 'mthombo wekhasi lokujonga, kwaye ungayifumana ngokuchofoza ngokuchanekileyo kwiphepha ngqo.
Njengoko ubona umthombo wekhasi le-HTML, kucetyiswa ukuba ubhale ngokufanelekileyo iinkcukacha zeluncedo kwiibanjwa kumgca weetafile. Isinyathelo esilandelayo kukuba ubhale iskripthi esiza kuyisebenzisa ukukhipha le ngcaciso. Iiphakheji ezimbini zePython esiza kuzisebenzisa kwinkqubo yokuphakamisa okunzima yiSobho esihle kunye nezicelo. Qiniseka ukuba uzifake phambi kokuba uqale ukuqhuba ikhowudi.
I-web scraping script iya kwenza izinto ezintathu. Ezi ziquka ukulayisha amaphepha encwadi kunye nokukhutshwa kwamanqaku kumaphepha eenkcukacha, ukulayisha nganye iphepha leenkcukacha kunye nokukhipha idatha, nokushicilela idatha ekhishwe kuye kuxhomekeke kwindlela ehlongozwa ngayo njengesixeko sokuhlala kunye nohlanga. Emva kokukuqonda oku, isinyathelo esilandelayo kukuqala inkqubo yokwenza ikhowudi ngokusebenzisa i-Soup Beautiful kunye nezicelo.
Okokuqala, ulayishe ngokulandelelanayo iphepha lokubangela ibanjwa usebenzisa izicelo.cwangcisa i-URL uze usebenzise isobho esihle ukusikhangela. Emva koko, sithatha ikhonkco kumaphepha eenkcukacha ngokukhwela kwimiqolo nganye. Emva kokutshintshela iinkcukacha zamabanjwa, isinyathelo esilandelayo kukukhupha isondo, iminyaka, ubuhlanga, ixesha lokubhuka, kunye nemilinganiselo yegama kwisichazizwi. Ibanjwa ngalinye liya kufumana isichazizwi sakhe, kwaye zonke izichazili ziya kufakwa kwiluhlu lwabanjwa. Ekugqibeleni, ulungelelaniso lomncintiswano kunye nemeko yedolophu ngaphambi kokugqitywa uluhlu lwakho.